Vheti inopisa iyi inokuvadza hutano here?
Chando chiri kuuya. Ndiri kuda kutenga bhachi rinopisa. Inokuvadza hutano hwangu here? Nekuda kwekusava neruzivo rwechisikwa chitsva, vanhu vanongoerekana vasina chokwadi kana kuvimba navo. Kunyangwe iyo vheti yemagetsi inopisa isiri chisikwa chitsva, chinhu chitsva chevanhu vasina kumbobatana ...
Kune vakomana kubva kunotonhora kwemazuva echando: Kukuudza chakavanzika, Imwe inopisa bhurugwa yakakosha mashanu marefu maJohn! Munguva pfupi yadarika, iyo nhau yekuti "mukwende wemukomana weShandong waive wakarongedzwa netirauzi raamai vake unorema 10 kg" wakatsvagwa zvakanyanya. Paakadzoka kubva kuzororo, akawana kuti chikwama chake ...
Magetsi anopisa zvipfeko rudzi rwehembe dzinogona kuburitsa kupisa uye kupisa zvine simba. Nheyo yaro ndeyekubatanidza magetsi, tembiricha yekudzivirira mudziyo, chengetedzo chengetedzo mudziyo uye kupisa chinhu kuburikidza newaya kugadzira dunhu, uye shandisa simba rekushandisa kudzora kudziya kwemagetsi ...
Nei uchisarudza Eleheat yemugadziri wekupisa pad?
Mamiriro ekunze anononoka kutonhora, iwo makuru ezvipfeko zvigadzirwa akatoparura nyowani nyowani uye yechando zvipfeko. Panguva ino, inguva inopisa yeidzi yekudziya. Nekudaro, kune akawanda mafekitori eheater muiyi indasitiri, nei uchisarudza Southern Sparkle Wearable Technology Co, Ltd? 1 ....
Smart zvipfeko, inofanirwa kutarisisa kudziviriro dhizaini yezvipfeko
Zvipfeko zvakakosha kune wese munhu. Chipfeko chave chechipiri ganda remuviri wemunhu kubva pakutanga kusvika pakunaka uye kudzivirira. Kuchengetedzwa kwembatya kunoda kutariswa. Iyo yekuchengetedza dhizaini yezvipfeko ndeimwe yemafambiro ekuvandudza eazvino mafashoni dhizaini dzidziso. Iko kuvandudzwa kwe ...
Kuchenesa pad, Ita kuti mufaro wako usvike
Kuchenesa pad kunonyanya kushandiswa sechinhu chinopisa mune dzakangwara kudziya zvipfeko izvozvi. Kunze kwezvo, nekuda kwekunyorovera uye kugadzirisa, kupisa pad kunogona zvakare kushandiswa muzvigadzirwa zvemumba, zvigadzirwa zvemuviri uye zvimwe. Chero bedzi dhizaini ine musoro, zvese zvinogoneka. Kana kupisa ...
Chii ngwara zvipfeko
Ndezvipi zvipfeko zvine hungwaru? Mazuva ano, inguva yehungwaru. Nhare mbozha, dzimba dzakangwara, mota dzakangwara, dzidzo yakangwara yakapinda muhupenyu hwedu, uye zvipfeko zvine hungwaru kuongorora kweiyo nguva yakangwara. Saka, chii chakapfeka smart? Smart zvipfeko ndiko kusanganisa o ...
Muhafu yekutanga yegore, kukosha kwakawedzerwa kwedenda rekudzivirira machira indasitiri yakawedzera ne 57,8%
Kubva muna Ndira kusvika June, iyo indasitiri yakawedzera kukosha kwamabhizinesi pamusoro pekugadzwa kweshizha muChina indasitiri yezvokupfeka yakadzikira ne6,7% gore-rimwe-pagore, zvichiderera ne9,8 muzana mapendi kana zvichienzaniswa nekota yekutanga. Iyo indasitiri yekushongedza machira indasitiri yakafambiswa neiyo kuvhiya mune dema ...
Mutori wenhau anozivisa 'chakavanzika' pane-mweya mhinduro kune dambudziko rekushanda uchisiya vanotarisa vachishamisika
na admin pa 20-08-10
Mutori venhau weChannel 10 akasiya vataridziri vachimisikidza mushure mekuburitsa pachena zvakavanzika mumuchinjiko wake wepamoyo izvo zvisina akacherechedzwa. Mutori venhau weAustralia TV anoratidza nzira yakavandika yekugadzirisa dambudziko rakakura. Mutori wenhau weChannel 10 Kristina Costalos akagovana vhidhiyo paTikTok vachikurukura nezve cha ...
Akadziya Armor's COO Gregory Thomas Anovhara Mazhinji-Mamiriyoni eDhora Kuita neCalifornia Yakavakirwa Kumusoro Nzvimbo
Chikunguru 27, 2020 Greg Thomas, Heated Armor's Chief Operating Officer akarova pasi kuputsa chibvumirano neCalifornia based The North Face. Heated Armor ndeyeColorado-yakavakirwa mbambo mutsara uyo unogadzirisa muumbozha nemitambo inotungamirwa zvipfeko zvekupisa. Kana iwe uri musasa, skier, rarama mukutonhora c ...
Mazano ekuti ungarova sei kupisa
Vanhu vanotambura zvakanyanya mumazuva eimbwa, heano mamwe matipi ekuti iwe ugadzirire kupisa kwakanyanya: o Regedza basa rinonetesa. Usaedze kuita zvakawandisa pazuva rinopisa. o Inwa mvura yakawanda; kunyangwe kana usiri kunzwa nyota. Dzivisa zvinwiwa zvinodhaka uye zvinwiwa zvakakwira mune shuga kana kuti caffeine. Kana chiremba wako ge ...
12v nenharo Car Seat Cushion, kushata Vest, Cotton Thermal Underwear, kushata bhurukwa, kushata bhachi, nharo huru Insoles Rechargeable ,